XOG:- Yaa ka dambeeyay in Maxamed Koofi loo magacaabo agaasimaha hay’adda socdaalka dalka – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Yaa ka dambeeyay in Maxamed Koofi loo magacaabo agaasimaha hay’adda socdaalka dalka
Maalmihii ugu dambeysay waxay shacabka Soomaaliyeed su’aalo badan iska weydiinayeen magacaabista uu ra’iisul wasaare Cumar C/rashid Cali Sharmaarke 26-kii bishaan ku magacaabay Agaasimaha hay’adda socdaalka iyo jinsiyadaha Maxamed Aadan Jimcaale (Koofi).
Inkastoo awoodda magacaabista xilkaasi uu lahaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadane sida iska muuqata waxaa mas’uuliyadaasi la wareegay ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar C/rashiid.
Arrinkaasi oo aynu daba-gal dheeraad ah ku sameeynay ayaa waxaa inoo suurto-gashay inaynu ku ogaano cidda sida rasmiga arrinkaasi uga dambeeysay.
Waxaynu soo ogaanay in arrnkaasi oo dhan uu ka dambeeyay wasiirka madaxtooyadda Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad, isagoona shaqsi ahaan u keensaday Gaashaanle Maxamed Aadan Jimcaale (Koofi), si xilkaasi loogu magacaabo, xilli ay beesha inteeda kale diidaneed magacaabista xilkaan ee Koofi.
Hadaba waxaa su’aal ah dowladda Soomaaliya ma waxay ku shaqeynaysaa danno shaqsiyeed mise danno guud, mar hadii uu shaqsi kasto la imaanayo qofkii uu la doonayo in xil loogu magacaabo balse aysan ahayn aqoon uu shaqsigaasi u leeyahay howsha loo magacaabayo.
Hoos ka aqriso wareegtadii xilka loogu magacaabay Maxamed Aadan Jimcaale (Koofi)